The "ọkara" - A Self-adịzi skuuta-ewe gị ka ọ na - Jomo Technology Co., Ltd
The "ọkara" - A Self-adịzi skuuta-ewe gị ka ọ
Nke a Koowheel Electric onwe guzozie skuuta e1 bụ ìhè ma energetic, patent Innovative fashionable jụụ imewe, Ikanam ngosi ihuenyo kpamkpam egosi batrị na-agba, super ujo absorption na 8inch roba pneumatic taya. E wezụga, apịaji na-ebu mfe. Otú ọ dị, ọ pụrụ inye anyị yiri ike na kwụsie ike dị ka dị na elu-imecha ejiji. Extendable azuokokoosisi, mma maka ma ụmụaka na ndị okenye.
Ọzọkwa, ọzọ kacha mma electric skateboard n'ezie ịkpatawo na mkpa ụgwọ n'ihi ya, ọ nwere ike na-agba ọsọ ngwa ngwa blanket ogologo nkewa na-aghaghị ịbụ ihe kwesịrị ekwesị maka n'elu mkpọda kwa. The ọsọ ha njem na dịgasị, Otú ọ dị ya nwere ike ịbụ iru max ọsọ 42 km kwa awa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ihe electric skuuta maka na gị onye na oriri, a E1 nwere ike a n'ezie echekwa na a na-enye aka ahụmahụ ị na onye ọ bụla na ndị ị hụrụ n'anya. N'agbanyeghị otú a ọtụtụ ị na-akwụ ụgwọ, ọ bụ fọrọ nke nta echetụ n'echiche izute ihe ụdị ọkụ odachi lurks (ma ọ bụ adịghị idu) n'ime bụla skuta. Ya mere, n'okpuru oké mmiri ozuzo, ọ bụ ihe amamihe dị nnọọ ka kpagharịa, na-pụọ puddles. Otú ọ dị tụnyere a sikwuo osisi, na E1 nwere a n'ezie ụtọ uru mkpado maka ya si ọcha - ihe ọ bụla mmezi, ọ dịghị ihe na-erughị. Ịnyịnya ígwè na-eji ọ bụghị nanị ruo ntụrụndụ nzube Otú ọ dị maka n'ụzọ - na-arụ ọrụ, ka nri na-ere ahịa, ihe nwere gị mgbe. M sere n'elu na-enwe ihe dị egwu fọrọ nke nta ka-anyanwụ dara skate. The mbụ na-agba ọsọ na a kasị ijeụkwụ 16mph, ebe ikpeazụ nwere ike gbagoo 22kmh. Ị nwere ike ihe echiche nke ijeụkwụ ókè nke nta Harley.
Post oge: Apr-20-2018